राष्ट्रिय समाचार Archives —
2019-12-17 2020-03-08 admin
काठमाडौँ / लोकदोहोरी गायक प्रकाश सपुतको छोरीको आज जन्मदिन परेको छ । पछिल्लो समयका एक चर्चित गायक हुन प्रकाश सपुत । पछिल्लो केही वर्ष यता उनले हरेक गीत बाट राम्रो सफलता पाएका छन् । केही वर्ष पहिले विन्दु बोहरा सँग विवाह गरेका प्रकाश की एक छोरी छिन् । रातको १२ बजे नै सामाजिक सञ्जाल फेसबुक बाट एक मन छुने स्टाटस लेख्दै उनले आफ्नी ४ वर्षीय छोरीलाई शुभकामना दिएका छन् । छोरीको एक तस्बिर सार्वजनिक गर्दै लेखेका छन्ः “जन्म_दिनको_शुभकामना_प्रविष्टि । ओहो कत्रो ठुलो पेट “ छोरै हुन्छ “ – बाजे पनि…
काठमाडौँ । मानिसको जीवनमा बिवाह भनेको एकदमै महत्वपुर्ण कुरा हो ! मानिसको जीवनमा एकपटक नभई नहुने कुरा अन्तरगत बिवाह पनि एक हो ! एक जना बाट दुइ जना हुनको लागि धेरै पटक सोच्नु पर्दछ ! एक दुइ दिनको कुरा हैन जिन्दगी बिताउने कुरा हो ! विवाहको फैसला गर्नु भन्दा पहिले धेरै पटक सोच्नु पर्दछ ! आफ्नो जीवन मा असल जीवनसाथी भेटियो भने त जिन्दगि सफल र सुखी बन्न सक्छ तर जीवन साथि गलत छ भने जिन्दगि नै जिन्दगि जस्तो हुदैन वास्तवमै विवाह गाह्रो र निकै चुनौतीपूर्ण हुन्छ । यदि जीवनमा…
एजेन्सी । ‘एप्पल’ विश्वमै यस कम्पनीको नाम र पहिचान नै छुट्टै रहेको छ । विश्वै राज गरिरहेको कम्पनी हो एप्पल । यस कम्पनीको नाम यसका संस्थापक स्टिभ जब्सले राखेका थिए । १५ वर्ष सम्म उनले जम्मा १ डलरमा मात्रै काम गरेका थिए । विश्वमै सबै भन्दा धेरै कमाइ गर्ने कम्पनी मध्यको एकमा पर्छ एपप्ल कम्पनी । यस बारे थुप्रै अनौठा तथ्य रहेका छन् । १. एप्पल कम्पनीको स्थापना अप्रिल १ अर्थात मुर्ख दिवसको दिन भएको थियो । अर्थात १ अप्रिल १९७६ मा भएको थियो । २. एप्पलको मुख्य कार्यालयका सबै…
2019-12-17 2019-12-21 admin
काठमाडौँ । कसैले तपाइसँग बोलिरहेको बेला मुन्टो बटार्छ भने सम्झनुहोस् तपाइको श्वास गनाइरहेको पनि हुन् सक्छ । श्वास गनाउने समस्या बाट धेरै जना दिक्क परिरहेका हुन्छन् । अरूसँग हाँस्दा बोल्दा नै सास गनाउन थाल्यो भने कोही पनि नजिक हुन चाहँदैनन् । हाम्रो सास गन्हाउनु भनेको नै अस्वस्थताको सङ्केत हो । आफ्नो सास गन्हाएको थाहा नपाउने पनि धेरै हुन्छन् । कसरी समाधान गर्ने त जान्नुहोस् घरेलु उपचारहरू सुत्नुभन्दा अगाडि दाँत माझ्ने : यदि तपाइले दाँतको सरसफाइमा उचित ध्यान दिनुभयो भने, सास गनाउने समस्या र विभिन्न किसिमका दन्तरोगहरूबाट पनि बच्न सकिन्छ ।…
काठमान्डौ / त्रिचालिस बर्षको उमेर मा पनि मोटरसाइकल बनाउने महिला सुन्दा सबैलाई अचम्म लाग्न सक्छ सबै काम पुरुष हरुले मात्र गर्नुपर्छ भन्ने छैन महिला हरु ले पनि जस्तो काम पनि गर्न सक्छन भन्ने कुराकी उदाहरनिय पात्र हुन् सरस्वति सुवाल ! एउटी महिला भएर पनि पुरुष ले जस्तै मोटरसाइकल वर्कसप मा काम गर्नु कुनै चानचुन कुरा होइन !उनलाइ आफ्नो कामप्रति गर्व छ ! सडक छेवैमा थोत्रा मोटरसाइकल लाइनै छन्। भित्र बाइकका पाटपूर्जा छरपस्ट। सटर बारेर त्यसको आडैमा एउटा सानो कोठा निकालिएको छ। भित्र दुइटा टेबल छन्। प्लाष्टिकका बट्टाहरूमा राखिएको नुन, चिनी,…
काठमाडौँ / डान्सर तेरिया मगर कुर्ता सुरूवालमा सजिएको तस्विर सामाजिक संजालमा सेयर गरेकी छिन् । भारतिय टेलिभिनजन डान्स इन्डिया डान्स बाट चर्चामा आएकी नायिका तेरिया फौजा मगर पछिल्लो समय चर्चमा रहिरहने सेलिब्रेटी हुन् । ‘डान्स इन्डिया डान्स’ ले नेपाली र भारतीय दर्शकमाझ लोकप्रिय बनायो तरियालाई । रुपन्देहीमा जन्मेकी तेरिया लामो समय आफ्नो करिअरका लागि मुम्बईमा बसिन् । केही समय पहिले उनी एक नेपाली चलचित्रमा अभिनय गर्ने खबर पनि बाहिर आएको थियो । पछि उनले आफूले फिल्ममा अभिनय गर्न नलागेको बताएकी थिइन् । क्युट तेरियालाई फ्यानले सामाजिक सञ्जालमा निकै पछ्याएका हुन्छन्…
सुरुङ्गा। विवाह मण्डपमा रहेकी बेहुलीलाई सिन्दूर हाल्न खोज्दा बेहुलाको हात नउठेपछि बेहुलाले बेहुलीको परिवारलाई रु चार लाख जरिवाना तिरेका छन्। यो झापाको घटना हो। मङ्सिर उन्तिस गतेको दिउँसोको लगन मा झापाको बुद्ध शान्ति गाउँपालिका–दुइ का न्यौपाने थरकी एक युवती सँग भद्रपुर नगर पालिका–सात का सुवेदी थरका एक युवक को वैवाहिक कार्यक्रम हुँदै थियो। वैवाहिक कार्यक्रम अनुसार बेहुलाले बेहुलीलाई सिन्दुर हाल्ने बेलामा बेहुलाको हात नचलेपछि बेहुली पक्षले विवाह अस्वीकार गरेको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका प्रहरी नायब उपरीक्षक महेन्द्रकुमार श्रेष्ठका अनुसार विवाह मण्डपमै खैलाबैला मच्चिएर बेहुला पक्षले जन्ती लगेको…
2019-12-16 2019-12-21 admin
काठमाडौँ/ धेरै जसोले भन्ने गर्छन् केटीहरूको मन बुझ्न गाह्रो हुन्छ । जुन एक हद सम्म सत्य पनि मानिन्छ । किनकि केटीहरूको दिमागमा के चलिरहेको छ भन्ने कुरा कसैलाई थाहा हुँदैन । त्यसैले गर्दा भेटभएको बेलमा केटीहरूलाई आफ्नो प्रेमीले यस्ता प्रश्नहरू नै नगरुन् भन्ने सोचाइ उनीहरूमा आइरहेको हुन्छ । उनीहरू भेटको क्रममा प्रेमीले आफूले लुकाएको कुरा नसोधोस् भन्ने सोचाई राख्छन् । म तिम्रो पहिलो प्रेम हुँ ? हरेक केटाले आफ्नी प्रेमिकालाई आफू पहिलो प्रेमी हो या होइन रु भनेर सोध्न चाहन्छन् । केटीहरुलाई आफ्नो केटा साथीभन्दा बाहेक पनि अरु नै कोही…
एजेन्सी । नयाँ वर्षको सुरुवात सँगै मानिसहरू नयाँ नयाँ ठाउँमा परिवार, साथीभाइहरू सँग घुम्ने,र नयाँ मानिसहरू सँग भेटघाट गरिरहेका हुन्छन् । नयाँ वर्षको उत्साहमा कोही मानिसहरूले आफ्ना पुराना सारा दुख भुलेर अघि बढिरहेको हुन्छ । भने कोही पुरानै सम्बन्धलाई एक मौका दिइरहेका हुन्छन् । यिनै अवसरहरूका बिच यस लेखमा जान्नुहोस् जुन राशि अनुसार यो वर्ष तपाइका लागी सम्बन्धहरूलाई लिएर कस्तो रहने छ । मेष राशी: मेष राशिका मानिसहरुका लागी २०१८ मा माया प्रेमको दृष्टिले धेरै राम्रो हुनेछ। यी मान्छे सप्तमेशको उच्चाभिलाषी भएका कारण दामपत्य जीवनमा प्रगति र विवाह आदि कार्यहरुमा…
काठमाडौँ/ पल शाह र पूजा शर्माको अभिनय रहेको चलचित्र म यस्तो गीत गाउँछु २ को गीत युट्युब ट्रेन्डिङको पहिलो स्थानमा पुग्न सफल भएको छ । सुदर्शन थापा निर्देशन रहेको चलचित्र म यस्तो गीत गाउँछु २ को पहिलो गीत तिम्रो घरको वरिपरि बोलको गीत केही दिन पहिले मात्र सार्वजनिक भएको थियो । यही फागुन २३ख गते बाट देशका विभिन्न हलहरूमा एकै साथ पर्दशनमा आउने भनिएको चलचित्र भिडियोमा अहिलेका एकदमै चर्चित सङ्गीतकार अर्जुन पोख्रेलको शब्द तथा सङ्गीत रहेको छ । सोनम तोप्देन र अस्मिता अधिकारीको स्वर छ । सोनम तोप्देनलाई सुदर्शनले आफ्नो…